कण्डम निःशुल्क हुने, स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ? – Nepali Health
कण्डम निःशुल्क हुने, स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ?
२०७५ फागुन २२ गते १९:१४ मा प्रकाशित
घोराही, २२ फागुन । पुरुषको आवश्यकतासँग जोडिएको कण्डम निःशुल्क हुने तर, महिलाका लागि नभै नहुने स्यानिटरी प्याड किन निःशुल्क नहुने ? अहिले यो विषयले चर्चा पाएको छ । धेरैजसो अधिकारकर्मी तथा नारी समानताका लागि काम गर्दैआएका सङ्घसंस्थाले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाइरहेका छन् ।
दाङको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने एउटा विद्यालयमा आयोजित सचेतना कार्यक्रमका एक किशोरीले जुरुक्क उठेर भनिन् –“बजारमा कसैले बार्दैनन् । गाउँमा हाम्ले मात्रै किन बार्ने ?” महिनावारी बार्नु कष्टकर छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ ।
घोराहीकी सामाजिक अभियन्ताकी ११ वर्षीया छोरी पहिलो पटक महिनावारी भइन् । कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी उनलाई महिनावारी के हो थाहा थिएन । न विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश थियो, न परिवारमा यसबारे कसैले कुरा गरेको उनले सुन्न पाइन् । साथीहरुले यसबारे चर्चा गरेको उनलाई थाहा थिएन । महिनावारी हुने बित्तिकै ती बालिका डरले चिच्याउँदै रोएकी ती अभियन्ताले सुनाइन् ।
“किशोरीहरुले शरीरमा आएका परिवर्तनका कारण एक्लै बस्न मन गर्ने र भावनात्मक रुपले कमजोर महशुस गर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्, “शरीरमा भएका परिवर्तनलाई सहज रुपले ग्रहण गर्न सक्ने वातावरण परिवारले दिनुपर्छ । अनि मात्र किशोरीको आत्मबल बढ्छ ।” यस्तो समयमा छुट्टै बसाल्ने र छोइछिटो गर्ने परिपाटी नै गलत उनी ठान्छिन् । परिवारसँगसगै विद्यालयका शिक्षक, साथीहरु र समाजको सकारात्मक व्यवहार पनि किशोरीहरुलाई आवश्यक पर्छ ।
विद्यालयमा पढ्दै गरेका किशोरीहरुलाई विशेष गरी महिनावारीको समयमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनी ठान्छिन् । “पकेट खर्च नहुने किशोरीहरुले कसरी किन्न सक्छन् यति महङ्गो स्यानिटरी प्याड ?” उनी भन्छिन् “महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिले पनि स्यानिटरी प्याडलाई सर्वसुलभ बनाइनुपर्छ ।”
विद्यालयकी शिक्षिका उषा गौतम विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड निःशुल्क बाड्न थालेपछि छात्रा पनि नियमित विद्यालय आउन थालेको बताउनुहुन्छ । “पहिले पढाइ चल्दाचल्दै महिनावारी भए हामी घर जान्छौं भन्थे, बाध्यताले हामीले पनि जान दिनुपथ्र्यो, उनीहरुको घण्टी छुट्थ्यो,” उनी भन्छिन् – “अब अवस्था फेरिएको छ । अहिले त महिनावारी भयो भन्छन्, प्याड माग्छन् तर, घर जाँदैनन् ।” महिनावारी हुँदा महिनामा ४-५ दिन नै विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति अहिले रोकिएको छ ।
प्याड वितरण कार्यक्रम शुरु भएपछि छात्राहरु नियमित विद्यालय आउने र आफ्ना कुरा खुलेर राख्ने भएका छन् । विद्यालयको स्रोत केन्द्रभित्र राखिएको प्याड आफैं कसरी निकाल्ने, कसरी प्रयोग गर्ने र कहाँ विर्सजन गर्नेसम्म सिकाएपछि छात्रा स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थित प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले विद्यालयमा निःशुल्क प्याडको माग आफूहरुले गरिरहेको उनले बताइन ।
मावि रझेनाकी छात्रा विपना गिरी सरकारबाटै विद्यालयहरुमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था भए आफूहरुलाई सहज हुने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “खेलकूदका लागि अनेक सामग्री विद्यालयमा आउँछ । विद्यालयले पनि खेलकूदमा लगानी गर्छ तर, महिलाको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्याडमा लगानी गर्दैन ।”
लामो समयदेखि परिवार योजना दाङ शाखामा कार्यरत महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएकी वरिष्ठ स्टाफ नर्स प्रभा श्रेष्ठ महिनावारीको समयमा सफा स्यानिटरी प्याडको प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छिन् । घरमा भएका फोहर कपडा प्रयोग गर्ने, घाममा नसुकाउने, राम्रोसँग नधुने गरेमा यसैको कारणले पनि धेरै किसिमका रोग लाग्न सक्छ ।
महिनावारीको हेलचेक्र्याइँ गरिए चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, किटाणु फैलिँदै गएर पाठेघरसम्म असर पार्ने पनि हुनसक्छ । महिनावारीको समयमा उचित सरसफाइ नगर्ने महिलाहरु धेरै समस्या लिएर आफू कहाँ परामर्श लिन आउने गरेको उनी बताउछिन् । विशेष गरी अविवाहित महिला र भर्खरै महिनावारी शुरु भएका किशोरीहरुलाई विभिन्न किसिमका समस्या देखापर्छ ।
“बजारमा पाइने स्यानिटरी प्याड निकै महङ्गो छ । आम महिलाको पहुँचमा पर्दैन,” उनले भनिन्, “अन्य औषधि जस्तै स्यानिटरी प्याड पनि सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।”
दशौँ नेपाल प्रत्यारोपण खेलकुद प्रतियोगिता आगामी ३० फागुनमा